Niakatra fampanoavana ny sabotsy teo ary naiditra am-ponja vonjimaika any Antalaha ilay mpamily nahafaty olona tao Sambava ary ny zoma izao ny fitsarana. Araka ny fifanarahan’ny fianakavian’ny maty sy ny tompon’ny fiara nandona ka namotika bajaj ary nahafaty tovolahy iray dia mandoa vola 16.000.000 Ariary sy manatitra ny razana any amin’ny fiaviany any Vangaindrano amin’ny famokarana mahamaina ny razana ny nahavanon-doza. Ny 5.000.000 Ar efa voaloa tamin’ny havan’ilay maty tsy tra-drano. Ny alahadin'ny Pentekosta tamin'ny 9 ora maraina no nitrangan'ny loza teo amin'ny ''Belle Souvenir” Sambava. Fiarabe iray no nandona “Taxi Bajaj” ka maty tamin'izany ilay tovolahy 18 taona antsoina hoe “Anjarson Judico” ary nisy roa hafa ihany koa naratra fa nalefa namonjy fodiana taorian’ny fitsaboana azy ireo teny amin'ny toeram-pitsaboana, anisany ilay mpamily Bajaj izay naratra ihany, ary efa nahazo fitsaboana sahaza azy teny amin'ny hopitaly.